Nandao antsika ilay kintan’ny reggae Bunny Wailer, ny farany tao anatin’ny tarika « Wailers » tena izy · Global Voices teny Malagasy
« Tsy afaka ny ho faty i Bunny, mandalo tetezamita fotsiny izy »
Voadika ny 13 Marsa 2021 17:04 GMT
ilay kintan'ny reggae, Bunny Wailer, nanao fampisehoana tao Negril nandritra ilay fitetezam-paritra tao Jamaika nantsoina hoe Dubdem Sound System, 2009. Sary natolotry ny Dubdem e FabDub tao amin'ny Flickr, nampiasàna lisansa CC BY 2.0.
Ny 2 Martsa, taloha kelin'ny tamin'ny 8 ora maraina (GMT-5), nodimandry teo amin'ny faha-73 taonany tao amin'ny Medical Associates Hospital ao Kingston, any Jamaika i Neville O'Riley Livingston, fantatra kokoa tamin'ny anarana hoe Bunny Wailer – na nantsoina tam-pitiavana hoe « Jah B ».
Bunny Wailer dia iray tamin'ireo mpikambana nanangana ny tarika mpiangaly reggae The Wailers [fr] (niaraka tamin'i Bob Marley [fr] sy Peter Tosh [fr]). Ny anarany dia efa azo andikàna sahady io karazana gadona mozika mpisava làlana teraka tao Jamaika io [fr], tany amin'ny faramparan'ny andian-taona 1960 ary vetivety dia niparitaka nahazo ny lafivalon'izao tontolo izao.
Tato anatin'ny taona vitsy farany, tsy dia salama loatra i Wailer. Tamin'ny 2018, tratry ny aretin'ny lalandrà tao amin'ny atidoha (AVC) ity efa in-telo nahazo ny Grammy Award ity. Narary izy taorian'ny AVC fanindroany nahazo azy tamin'ny Jolay 2020. Fotoana fohy taorian'ny 23 May tamin'izay taona izay ihany, fotoana nanjavonan'ilay olontiany hatry ny ela, Jean Watt, fantatra amin'ny anarana hoe Sister Jean, no nitranga io aretiny farany io. Tsy mbola hita ramatoa io hatramin'izao.
Tena nandona mafy tokoa an'ireo Jamaikàna sy ireo mpankafy ny tarika Wailers manerana ny tany ilay vaovao nilaza ny fodiamandrin'i Bunny Wailer, indrindra moa fa vaovao tonga roa herinandro monja taorian'ny fodiamandrin'ny iray hafa olomalazan'ny reggae, U-Roy, teo amin'ny faha-79 taonany.
Noho ny fangatahan'ny fianakavian'i Wailer, namoaka fanambaràna iray ihany koa ny minisitry ny kolontsaina ao amin'ny firenena, Olivia « Babsy » Grange:
Homamiadana no nahafaty an'i Bob Marley tamin'ny 1981 ary Peter Tosh kosa maty nisy namono tao an-tranony tamin'ny 1987.
Ny 20 Aprily 1947 i Livingston no teraka tao Kingston, saingy nanomboka teo amin'ny fahafiton'ny taonany, niara-nonina tamin'ny rainy tany Nine Mile, St. Ann izy, distrika iray any ambanivohitr'i Jamaika. Lasa mpinamana izy sy Marley fony izy ireo niray sekoly garabola sy faharoa fototra tao Stepney. Raha ny zavanisy, dia mpirahalahy tsy iray kibo izy roalahy, satria i Cedella Booker, renin'i Marley dia sipan'i Thaddeus rain'i Bunny.
Taorian'ny nifindran'izy ireo ho any Trench Town, Kingston, nifanena tamin'i Peter Tosh ry zareo ary nanangana tarika iray, mbola nantsoina hoe The Wailing Wailers aloha tamin'izany. Ilay mpitendry mozika reggae Joe Higgs, nipetraka tsy lavitra azy ireo no nandray ny fiahiana an-dry zareo, ary nampiditra tamin'ny farany an'ilay mpihira Junior Braithwaite sy ireo feo lafika Beverly Kelso sy Cherry Green ho ao anatin'ny tarika. Io tarika mpanakanto io no lasa The Wailers.
Fonon'ilay rakikira « Original Wailers Musical Lesson » ; sary maneho ireo dimy mpikambana tao anatin'ny tarika. Sary an'ny vinylmeister tao amin'ny Flickr, nampiasàna ny lisansa CC BY-NC 2.0.
Tamin'ny Desambra 1963, tao amin'ilay studio Studio One [fr] ny tarika no nandraikitra ny hira ska nataony hoe Simmer Down. Fahombiazana goavana no azon'io hira io, ary lasa « laharana voalohany ». Taorian'ny nandraketany rakikira roa sy singles marobe, nandavaka ny sehatra isairampirenana ny tarika, niaraka tamin'ilay rakikira « Catch a Fire » [fr] teo ambanin'ilay maripamantarana Island Records an'i Chris Blackwell.
Ny rakikira farany niarahan'ireo telo mpikambana mpamorona dia ny « Burnin’ » [fr] (1973), ka hita tao amin'izany ilay Get Up Stand Up. Kanefa, nandritra ny fiainany i Bunny dia nitohy hatrany ho fakàn-kevitra amin'ny maha-manampahefana faratampony azy raha vao ny Wailers no asiana resaka, tafiditra tamin'izany ilay sarimihetsika fanadihadiana tsy azo ihodivirana, Marley, nivoaka tamin'ny 2012, izay mitantara ny dingana nodiavin'ilay hanjary ho « mpaminanin'ireo voaporitra».
Rastafarien mafàna fo tsy tia loatra ilay fomba fiaina mitety faritra i Livingston ka nandao ny tarika tamin'ny 1973 ary nanomboka niketrika nyy rakikirany voalohany, « Blackheart Man », nankalazaina ho toy ny klasika ho an'ny reggea roots.
Nandritra ny andian-taona 1990, Grammys telo no azony ho an'ireo rakikira fankalazàna ny lova navelan'i Marley : « Ny Fotoana no Hilaza: Fanomezana Voninahitra an'i Bob Marley » (1991) ; « Crucial! Roots Classics »(1995) ; ary ny « Hall of Fame: Fanomezana Voninahitra ny faha-50 taonan'i BM » (1997). Hita ao anatin'ireo rakikira ny fiarahana miasa amin'ireo zanak'i Marley, Damian, Stephen sy Ziggy.
Tamin'ny 2017, nahazo medaly Ordre du mérite [fr] tao Jamaika i Livingston, loka nasiônaly atolotra ho an'ireo Jamaika (ary indraindray ho an'ireo olona mizaka zompirenena hafa) izay nahavita zavatra niavaka teo amin'ny zavakanto, ny literatiora na ny siansa.
Tao anaty sarimihetsika fanadihadiana fohy izay mitahiry ny aty lalin'ny fiainany, naseho ho toy ny zokibe iray i Livingston, rastafariàna mpitantara angano (griot) ankamamiana, manokan-tena ho an'ny finoana narahany sy ny mozika ary ny kolontsaina jamaikàna. [Fanamarihan'ny mpandika: Ao Afrika Andrefana, ny atao hoe griot dia olona iray mitàna ny andraikitry ny mpampita lovantsofina, mpahay tantara, mpiventy tononklao sy/na mozisiàna.]
Taty aoriana, ny fahaiza-mandresy lahatra olona, izay voajanahary tao anatiny, sy ny fientanampony – hita ao anatin'ity antsafa natao ho an'ny sarimihetsika fanadihadiana Fire in Babylon ity, momba ny lalao cricket ao Antilles – dia manome toerana ny fihibohana (toy ny gadra). Nanomboka tamin'io fotoana io izy dia zara raha nanao fampisehoana mivantana. Nisy lahatsoratra iray tamin'ny 2006 tao anaty gazety Washington Post nanamarika fa « izy foana hatramin'izay no endrika miavaky ny kintana iray ara-barotra, ary koa olomalaza iray saro-pantarina indrindran'ny reggae ».
Rariny ireo Jamaikàna raha hieritreritra hoe miaraka amin'ny fodiamandrin'i Wailer, toko iray amin'ny mozika jamaikàna no nikatona. Ao anatin'ilay hira milaza mazava Dreamland, izay niarahany nanoratra, amin-pihetsehampo izy no mihira hoe :